Nhau - Pamusoro 10 Matairi Ekuchengetedza Mazano
Auto Shop, Matayi shopu & Auto Repair, Car Wash, Fleet, Car Dealer & Auto Rental, Gas Station / C-Store, Kubasa & Dzimba dzekugara.
Chivabvu 18-24 iNational Tire Chengetedzo Vhiki!Vatyairi pavanofunga nezvezvinhu zvinonyanya kukosha zvokuchengetedza mumotokari yavo, vangafunga nezvemabhandi ezvigaro uye mabhegi emhepo, asi kuchengeteka kunotangira panosangana rabha nomugwagwa.Ndosaka takaisa pamwechete iyi runyoro rwemazano gumi anobatsira ekukuchengetedza wakachengeteka paunenge uri munzira.
Ita shuwa kuti matai ako akafemerwa zvakanaka!
Kukwira kwemitengo kwetayi kwakaringana kunopa kubata kuri nani, hupenyu hwakareba hwetai, uye kunyange gasi mileage iri nani.Kudzikira pasi uye kuwandisa vhiri rako kunogona kutungamirira kukurasikirwa kwekudhonza kana kutadza zvachose kwevhiri.Ita shuwa yekutevera kurudziro yevagadziri iyo iwe yaunogona kuwana pane inonamirwa mukati memutyairi-padivi remusuwo jamb kana mubhuku remuridzi wako kuti uve nechokwadi chekuti uri kufefetera matai ako kune chaiyo psi.
Isu tinokurudzira kutarisa kudzvanywa kwevhiri rako kamwechete pamwedzi wega wega uye usati uye mushure mekufamba kwenguva refu.Ramba uchiyeuka kuti zvinhu zvinoverengeka zvinogona kuita kuti chinjo musimba retai, kusanganisira tembiricha!
Ngwarira zviratidzo izvi kuti imba inogona kunge iri kuuya.
Muchiitiko chepamusoro-soro, vhiri rakaponja rinogona kunetsa.Pakuipisisa, zvinogona kuva nengozi.Ndosaka zvichibatsira kuziva zviratidzo zvekuti vhiri rakaponja rinogona kuuya risati raitika.Kana ukaona kuderera kuri kuramba kuchiitika pasinei nekuedza kuwedzera simba revhiri rako, kukuvadzwa kwemadziro emadziro, mapundu ari muvhiri rako, kana kuti kuzunguzika kwakanyanya paunenge uchityaira, unofanira kuonana namakanika kana chitoro chematai.
Ziva kana yasvika nguva yemavhiri matsva
MuUS nedzimwe nzvimbo zhinji dzepasi, matai anoonekwa seakasakara kana kudzika kwawo kwakapfekwa kusvika pa2/32 ″.Mutemo weUS unoda kuti vagadziri vabatanidze-inooneka-inotaridza mabara anomhanya kubva kune rimwe divi rekutsika-dhizaini kuenda kune rimwe.Kuti uwedzere kubata mumamiriro ekutsvedza, Tire Rack inokurudzira kuti vatyairi vatsive matai avo pa4/32 ″ yekutsika kwasara.
Usaregeredza yako spare.
Zviri nyore kuti vatyairi vaongorore mavhiri ari pamotokari dzavo vokanganwa kutarisa paasina.Ita shuwa kuti unotarisa yako yakasarudzika mwedzi wega wega kuti uone kuti isarudzo yakachengeteka kana iwe uchida kuishandisa.Zvinogona kuva nengozi zvikuru kushandisa spare isina kuchengetedzeka pamugwagwa.
Tarisa madziro ako eparutivi kuti akakuvara here.
Tarisa madziro ako eparutivi nguva zhinji kuona chero mapundu, kuchekwa, mabundu, makatsemuka, kana zvimwe zvisina kunaka.Izvi zvinowanzova chiratidzo chekushaya simba kwevhiri rinokonzerwa nekurovera mumigwagwa, gomba, kana dzimwe njodzi dzomumugwagwa.Kana iwe ukaona chero chiratidzo chekukuvadza, unofanirwa kutsiva vhiri sezvo kupisa uye kupokana kubva pakutyaira kunogona kutungamirira kukuputika paunenge uri munzira.
Teerera kune izvo zvaunopfeka zvakapfekwa zviri kuedza kukuudza.
Dai matai ako aigona kutaura, unofunga kuti aizoti kudii?Sezvazvinozoitika, matai ako anogona kutaura zvakawanda nezve mota yako zvichienderana nemapfekero awo.Kana matsikirwo ako akasakara zvakanyanya pakati pepakati pane mativi, iwe unogona kunge uri kuwedzeredza matai ako.Kana matsikirwo ako akanyanya kupfekwa kunze, zvinoratidza kuti matai ako adzikiswa.Kana ukaona matai ako ari kupera nokukurumidza kune rimwe divi kana rimwe divi, kana kuti kana matai acho achingopera nguva nenguva, chimwe chinhu chingave chisina kumira zvakanaka pakurongeka kwako kana kumiswa.
Chero nguva iyo matai ako anoratidza zviratidzo zvekusafanana, zvinongoreva kuti vhiri rako harisi kugovera huremu zvakaenzana mumugwagwa izvo zvinogona kutungamirira kukuwedzera kupfeka, hupenyu hupfupi hwematoyi, kurasikirwa kwekudhonza, uye hurombo hwegasi mileage.
Ita shuwa kuti une matai akakodzera kana chando ichitenderera
Mune tembiricha ye45-degree (F) uye yakaderera, matai emwaka wese anogona kutanga kuoma uye kurasikirwa nekubata.Matai echando acharamba achichinjika mumamiriro ezvinhu aya anogona kuunza kuwedzera kwe25-50% mukudhonza pamusoro pese-mwaka matai.Ndiwo unogona kunge uri muganho waunoda kudzivirira tsaona yakakomba, kunyanya munzvimbo dzinotsvedza.
Ziva kuti matai ako ane makore mangani
Iyi matipi haingorevi mileage pamatairi ako, asi paakagadzirwa.Zvinotarisirwa nemutemo kuti vagadziri vanosanganisira kodhi yedata pazasi pemadziro evhiri rega rega ravanogadzira.Nhamba ina dzekupedzisira pakodhi iyoyo dzinoratidza pakaitwa vhiri.Semuenzaniso, kana manhamba mana ekupedzisira ari 2516, vhiri iroro rakagadzirwa muvhiki rechimakumi maviri neshanu ra2016.
Kana iwe usingaite kunge wawana iyo kodhi, inogona kunge iri mukati memukati mevhiri rako.Kunyange izvi zvichigona kuita kuti zviome kutarisa, zvichiri kukosha kuziva sezvo vamwe vagadziri vanokurudzira kutsiva matai makore matanhatu ega ega - kunyangwe matsikirwo acho achitaridzika senyowani!Consumer Reports inokurudzira kuvashandura makore ose e10 zvisinei kuti chii.
Ziva apo matai ako anoda kutenderedzwa uye iva nechokwadi chokuti unotevera nawo.
Kutenderedza matai ako kunogona kuenda kure mukuona kuti matai ako anopfeka zvakaenzana izvo zvinogona kuabatsira kugara kwenguva refu uye kudzivirira kuvhuvhuta.Kutenderedza matai kunosanganisira kufambisa matai emberi kumashure kwemotokari yako uye zvichipesana.Kazhinji, izvi zvinokurudzirwa kune yega yega 5,000-7,500 mamaira.Zvisinei, pane zvimwe zvisiri izvo.Ita shuwa kuti watarisa bhuku remuridzi wako kuti uve nechokwadi chekuti urikutevedzera zvinokurudzirwa zvemota yako.
Usaremedze matai ako.
Kurongedza huremu hwakawandisa mumotokari yako kunogona kugadzira kupisa kwakanyanya mukati mematairi ako izvo zvinogona kudzvinyirira kana kukuvadza.Izvi zvinogona kupfupisa zvakanyanya hupenyu hwetai rako uye pamwe kutungamirira mukuputika.Ita shuwa kuti urikutevera kurudziro yemugadziri iyo inogona kuwanikwa muchikwangwani cheruzivo rwemotokari mukati mepasuo repadivi pegonhi remutyairi wako kana mubhuku remuridzi wako.
Nguva yekutumira: May-14-2021